QM oo maanta ka doodaya sidii loo qaadi lahaa Xayiraada Hubka ee Soomaaliya
Home Somali News Somalia:QM oo maanta ka doodaya sidii loo qaadi lahaa Xayiraada Hubka ee...
Somalia:QM oo maanta ka doodaya sidii loo qaadi lahaa Xayiraada Hubka ee Soomaaliya
Golaha amaanka ee QM, ayaa maanta gelinka danbe lagu wadaa ineey ka shiraan mashruuc qabyo oo ay horay usoo gudbiyeen doowlado qayb ka ah golaha amaanka, waxaana doowladahaas kamid ah Mareeykanka, qorshahaas oo ku aadan sidii looga jawaabi lahaa dalabka doowlada Soomaaliya eek u aadan in la qaado xayiraada hubka ee Saaran dalka.
15-ka xubnood ee golaha amaanka QM, ayaa marka ay fadhiga isugu yinmaadaan waxay ka doodi doonaan habka ugu haboon ee Soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraada hubka ee wadanka saaran.
Doowlada Mareeykanka ayaa waxay ku cadaadineeysaa golaha amaanka ee QM, in ay fuliyaan dalabka kasoo yeeray doowlada Soomaaliya, balse doowladaha Faransiiska iyo Britain, ayaa ka walaacsan qorshayaasha ka soconaya xaruunta QM ee New York, ee looga arinsanayo in la qaado xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya.
Xogahaya guud ee QM, Baan Kii Moon, ayaa waxaa laga dhagaysan doonaa warbixin ku aadan Soomaaliya uuna kaga hadli doono arimo dhowr ah oo ay ugu horeeyso arinta ku aadan mudo kordhinta ciidamada AMISOM, ee kusugan Soomaaliya, islamarkaasna ay taageeraan QM, iyo sidoo kale sidii looq aadi lahaa xayiraada hubka ee lagu soo rogay sanadkii 1991-kii, xiligaas oo ay Soomaaliya weysay doowladeedii Milatariga.
Diblomaasiyiinta ku sugan xaruunta QM, ayaa iyagu sheegay ineey Qatar kadhalan karto sidii Soomaaliya xayiraada hubka looga qaadi lahaa, waxaana ay kamuujiyeen suurtagalnimada in hubkaas uu gacanta ugalo kooxda mayalka adage e Al-shabaab, islamarkaasna xiriirka la leh Al-qaacida.
Amnesty International, ayaa waqti hore waxay digniin kasoo saartay in golaha amaanka ee QM, ay u codeeyaan qorshahaas ee cunaqabateynta hubka looga qaadayo Soomaaliya, oo ay xiligaan kajirto doowlad aan KMG ahayn, inta badan beesha Caalamka ay u aqoonsadeen ineey tahay doowlad matali karta dalkeeda.